ICJ oo inta badan Soomaaliya u xukuntay muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaICJ oo inta badan Soomaaliya u xukuntay muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya
October 12, 2021 Puntland Mirror Somalia 0
Garsoore katirsan maxkamada oo akhrinaya go’aanka maxkamada. [Isha Sawirka: ICJ SCREEN GRAB]
Hague-(Puntland Mirror) Maxkamada Caalamiga ee Cadaalada (ICJ) ayaa inta badan Soomaaliya u xukuntay muranka badda kala dhaxeeya Kenya, iyadoo xuduud badeed ka sameysay qeyb kamid ah Badweynta Hindiya oo la rumeysan yahay inay hodan ku tahay shidaalka iyo gaaska.
Kenya, oo sugtay dhul ka baxsan soo jeedinta Soomaaliya, waxay ku guuldareysatay inay caddeyso inuu jiro xuduud badda oo u dhexeysa dowladaha, taasoo siin lahayd qeyb weyn oo ka mid ah dhulka lagu muransan yahay, ayay maxkamaddu ogaatay.
Xukunkan ayaa yimid kadib markii Kenya ay todobaadkii hore sheegtay inay kala noqotay aqoonsigii ay maxkamaddu lahayd. Ma jirin qof Kenya u dhashay oo si rasmi ah u joogay maxkamadda ama uga qeybgalay fiidiyoow.
Soomaaliya ayaa dacwadda u gudbisay maxkamadda ugu sarreysa Qaramada Midoobay sannadkii 2014 -kii ee ku saabsanaa murannada u dhexeeya dowlad goboleedyada.